Dowladda Itoobiya Oo Dhax-Dhaxaadinaysa Maamullada Somaliland iyo Puntland. |
Dowladda Itoobiya Oo Dhax-Dhaxaadinaysa Maamullada Somaliland iyo Puntland.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Maamulka la baxay Somaliland Maxamed Biixi Yoonis ayaa daboolka ka qaaday in dowladda Itoobiya ay dhexdhaxaadineyso Maamullada Somaliland iyo Puntland.
Maxamed Biixi Yoonis waxa uu tilmaamay in dhowaan iyaga iyo Maamulka Puntland uu kulan ku dhexmaray magaalada Addis Ababa, kulankaas oo ay soo qaban qaabisay Dowladda Itoobiya waxaa qorshuha ahaa in labada maamul loogu kala dab qaado.
Xiisaddii dhowaan ka dhacday degmada Taleex iyo murano kale oo siyaasadeed oo u dhaxeeya labada dhinac ayay Dowladda Itoobiya isku dayeysaa inay dhameyso, mana la oga halka ay hadda wadahadalladu marayaan.
Wasiirka arrimaha Dibadda ee Maamulka Somaliland waxa uu ka gaabsaday inuu faah faahin ka bixiyo wadahadallada soconaya iyo heerka ay marayaan, wuxuuna xusay in Itoobiya ay tahay Dowlad deris ah, cilaaqaad wanaagsanna ay la leeyihiin.
Dowladda Itoobiya waxay daaha gadaashiisa ka maamushaa Maamullada daba dhilifyada ah ee dalka Soomaaliya ka jira ee uu ugu tunka weynyahay maamulka Villa Soomaaliya ee Xasan Gurguurte hogaamiyo, waxeyna horey u dhex dhaxaadisay Maamulka Dowladda Fedraalka iyo kan la baxay Jubba ee uu hogaamiyo Axmed Madoobe.